Sida loo lugeeyo bisadayda | Bisadaha Noti
Sida loo lugeeyo bisadayda
Sawir - Wikihow.com
Waxaan u maleyneynaa in bisaduhu aysan u baahnayn inay socod ku baxaan, maxaa yeelay dhammaantood waxay ku qabtaan meheraddooda sanduuqa qashinka waxaanan siinnaa alaabo ay ku ciyaaraan si ay u maaweeliyaan isla markaana, si kadis ah, u helaan jimicsi yar. Si kastaba ha noqotee, ma iloobi karno inay yihiin xayawaan, in kasta oo ay ku noolaan karaan noloshooda oo dhan guriga gudihiisa, wuxuu ubaahanyahay inuu banaanka u baxo waqti ka waqti si uu wax u baaro. Waxay ku jirtaa dabeecadooda.
Laakiin dabcan, marka aan joogno magaalo waxaa jira khataro ka badan faa'iidooyinka, marka xaaladdan marka la eego waxaa aad uga wanaagsan inaadan khatar gelin oo aan xanaaqayaga ku haysanno guriga. Hadda, haddii ay dhacdo inaan degno magaalo ama aan geli karno meelaha xasilloon, waxaan kugula talinayaa inaad la qaadato. Labadaba aad baad u raaxaysan doontaa. Baro sida loo lugeeyo bisadayda.
1 Ilaali bisadaada
2 La soco bisadda
Markaan dooneyno inaan barno dhogorteenna inaan xadhig u baxno, waxa aan marwalba maskaxda ku hayno waa amnigooda. Waa, wax walba ka sarreeya, maxaa inala gudboon inta badan. Sidaa darteed, kuma ekaan doonno oo kaliya inaan ka carrabaabino si aan uga hortagno boodada ama shilinta (ama labadaba) inay ku shubtaan, laakiin sidoo kale waa inaad iibsataa suunka raaxada leh iyo xadhigs, gaar ah bisadaha.
Kahor intaanan dibadda u bixin, waa inaan la qabsano suunka. Sidaa darteed, waxaan dhejin doonnaa illaa 10 daqiiqo maalin kasta, illaa aad ka aragto inaysan mar dambe dareemeyn raaxo-darro. Markaad ugu dambayntii sameyso, gashado isaga oo u kaxee guriga dhexdiisa, marka hore kaligaa ka dibna adiga kula soco. Socodka waa inay ahaadaan kuwo aad u gaaban marka hore. In yar oo ka mid ah ayaa loo dheereyn karaa.
La soco bisadda
Mar alla markii aad dareento raaxo iyo xasillooni, xarka gashada oo xiranto eygaaga dhogorta badan una tag meel deggan (gaariga leh). Haddii markii aad dhulka dhigto ay muujiso xiisaha, waxaad socod gaaban ku mari kartaa aagga, laakiin haddii aad aragto inay argagaxsan tahay, waxaa fiicnaan laheyd inaad markale isku daydo maalin kale.
Muddada socodka ayaa kordhi doonta marka xayawaanku la qabsado, laakiin waa inaanan marnaba ku qasbin ama ku qasbin inuu wax sameeyo.
Sawir - Petsafe.net
Ku-lugeynta bisad waxay noqon kartaa waayo-aragnimo cajiib ah, laakiin waa in had iyo jeer lagu qaboojiyaa oo dulqaad leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sida loo lugeeyo bisadayda
Xasaasiyadda bisadaha ku jirta
Daawooyinka guriga lagu siiyo si loogu bisleeyo bisadaha